I-china eyenziwe ngokwezifiso iimpahla zefanitshala zeplastiki, iAnti - iTip Strap, abavelisi beFurniture abavelisi - Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co, Ltd
I-Qiaofeng ijolise kwifenitshala enkulu, ukukhanya, i-elektroniki, iithoyi kunye namanye amashishini ukubonelela ngeemveliso zeplastiki kunye nezixhobo.
iinkcukacha â – ¶
Qiaofenginokubonelela ngoyilo lwesikhunta kunye nokwenza, inaliti yokubumba, ukuqhubekeka kunye nokuhlanganiswa kweenkonzo ezihlanganisiweyo.
Sinikezela ngokusebenza okuphezulu kunye nesisombululo esiguqukayo semigca eyahlukeneyo yabathengi abavela kwihlabathi liphela.
Abathengi benkampani kwihlabathi liphela, kwaye sinethemba lokusebenzisana nawe!
Ifenitshala amalungu ABS iinxalenye
Iinyawo ze-M10 zokulinganisa ifanitshala
I-24W iplastiki yokuphuma kokulawulwa kokulawulwa kwendawo yokudibanisa
Iplagi yolwandiso lwe-7 * 30mm PE
Umkhuseli webhokisi yeplastiki we-120mm onokuhlala ixesha elide
I-Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co, Ltd, eyasekwa ngo-2008 ukusukela oko yasekwayo, inkampani ibigxile kwifenitshala enkulu, izibane, i-elektroniki, iithoyi kunye namanye amashishini ukubonelela ngemveliso zeplastiki kunye nezinto ezincedisayo. izixhobo, ifanitshala yePlastiki yeLed Driver ebiyelweyo ngaphakathi emhlabeni jikelele. Inkampani inemishini emininzi yokubumba yenaliti kunye nezixhobo zokuvelisa iiplastikhi, ezinokubonelela ngeenkonzo ezihlanganisiweyo zoyilo kunye nokuvelisa, ukubumba ngenaliti, ukuqhubekeka kunye nokuhlangana.Sikwamkela i-OEM / ODEM kunye nepakeji. Siza kukubonelela ngexabiso kunye nenkonzo.
Izixhobo zeplastikhi zeplastiki zihlala zisetyenziswa ebomini, ezinye iifenitshala ziya kusetyenziswa, kodwa ikwadlala indima ebaluleke kakhulu, ifenitshala yeofisi ikakhulu ibhekisa kwifenitshala efanelekileyo yeofisi, kufakelo nakwimveliso kusafuneka inkxaso yezincedisi, emva koko izinto zefanitsh...
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye pricelist, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24. Siza kubonelela ngexabiso kunye nenkonzo.